Umklami Wezemfashini uProlific uSatya Paul Udlula Ku-78 - Izindaba Zemfashini
Umklami Wezemfashini uProlific uSatya Paul Udlula Ku-78
Umsiki wengqephu owaziwayo futhi ongumsunguli welebuli engaziwa, uSatya Paul, udlule emhlabeni ngoLwesithathu eneminyaka engu-78. Ubese-Isha I-Yoga Isikhungo eCoimbatore, nendodana yakhe uPuneet Nanda ngaleso sikhathi.
ukuvimbela kanjani ukuwa kwezinwele kowesifazane ngokwemvelo
NguNanda omemezele lezi zindaba ezimbi ngeFacebook ngoLwesine. Umbhalo wakhe ubufundisa ukuthi uSatya Paul wahlaselwa yisifo sohlangothi ngoDisemba 2, 2020 futhi wayelulama kancane kuso esibhedlela. 'Isifiso sakhe bekuwukukhipha zonke izinto abebhekwe ukuthi zikhona - asuswe, ukuze akwazi ukundiza,' kubhala uNanda. Ngokwencwadi, Isha Yoga Centre, ephethwe uNanda, bekuyikhaya likaSatya Paul kusukela ngonyaka wezi-2015.
Okubhalwe nguNanda mayelana nokudlula kukababa wakhe kuqhubeke kufundeka kanje, “Abantu abaningi abazi, ngaphezu kokuba ngumklami noma usomabhizinisi, yena (uSatya Paul) ubengumuntu ofuna ngokuqinile. Ngama-70 uhambo lwakhe lwangaphakathi lwaqala ngokulalela izingxoxo noJ. Krishnamurty, ngokuhamba kwesikhathi wathatha ama-sannyas kusuka ku-Osho. Ngemuva kokuthi u-Osho eshiye ngo-1990, yize ayengafuni enye i-Master, wathola iSadhguru ngo-2007… Ube ngumnyango wabantu abangamakhulu ababheke ngokomoya kanye nawo wonke amaMasters ayebusiswe kakhulu ukuba nawo. Wayengeke abe nokuphila okumnandi noma ukudlula ... ezinyaweni zikaMaster. Sibuhlungu kancane, ikakhulukazi simthokozela, impilo yakhe futhi manje nokudlula kwakhe ngesibusiso esinjalo. ”
“Labo abebenaye noma kunini empilweni bazomkhumbula njengomuntu owakhombisa uthando lwakhe ngaphandle kokungabaza noma yiziphi izithiyo. Ngingamfakazela ukuthi uphile ngokuphelele futhi washiya egcwalisekile ngayo yonke indlela. Kuyisivumelwano esikhulu kuye njengoba ahamba ngenjabulo, ngaphandle kokwesaba, ”uPuneet uphinde wabhala ngokufa kukayise, uSatya Paul.
USatya Paul wayaziwa kakhulu ngemibhalo yakhe ebanzi ehlangene nephalethi yombala ocacile. Yakhula yaba phakathi kwezinhlobo ezimbalwa zemikhiqizo yaseNdiya. Lo mkhiqizo wasekhaya wasungulwa ngumqambi futhi wasizwa nguSanjay Kapoor weGenesis Luxury. Emuva ngo-1985. Indodana kaPaul uPuneet kwakungu-Creative Director uptil 2010.
usawoti omnyama ulungele impilo
isisu sokuzivocavoca ekhaya
ungamisa kanjani izinwele ukuthi zingawi ngokwemvelo
amathiphu wobuhle enzelwe isikhumba esikhanyayo